Mihoatra lavitra noho ny fanalàna ny fahirano amerikàna no tadiavin’ireo Kiobàna · Global Voices teny Malagasy
Fanafody, sakafo, fahalalahana ary demaokrasia koa no tadiavinay
Voadika ny 28 Jolay 2021 5:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, English, Dansk, Esperanto , Nederlands, Français, русский, Español
Arabe Havana, an'i Pedro Szekely/Flickr (CC BY-SA 2.0)
Ity dia lahatsoratra tsy nitononana anarana avy amina mpanoratra iray ao Kiobà, nampiasa ny anarana sandoka hoe “Luis Rodriguez.”
Raha nitsotsotra tany an-tokantranony ny maro tamin'ireo Kiobàna tamin'ny Alahady 11 Jolay teo, nisy hetsika faobe nitranga tao an-tanànan'i San Antonio de los Baños nitakiana ny fahafahana hahazo vaksiny, sakafo, fanafody, ary fahalalahana, satria ireo no tena asa saina isanandro manjo ny vahoaka kiobàna amin'izao fotoana izao.
Na ny filoha Miguel Díaz Canel aza dia nandeha nankany amin'io tanàna kely io mba hiezaka hampitony ny toedraharaha, raha ireo hetsipanoherana kosa niparitaka tany amin'ireo toerana hafa tao an-drenivohitra sy nanerana ny firenena. Niteraka korontana sôsialy niezinezina ireo tranga ireo, izay nahatohina, tsy ny fitondràna kiobàna irery ihany, fa hatramin'ny fiarahamonina iraisampirenena.
Tranga iray tsy mbola hita tao anatin'ny tantaran'i Kiobà, nitranga taorian'ny 62 taona nanaovana Tolompiavotana, ka nanamafisan'ireo mpandalina marobe sy ny gazety erantany fa nisongona lavitra ny fitroarana nisy tamin'ny 1994 tao Maleconazo. Mba hanamaivanana ny tsy hafalian'ny vahoaka sy ilay hetsika tampoka, nisisihan'ny governemanta kiobàna ny fanomezana rariny ilay fitantaràna manao hoe avy any Etazonia no nitarika ireo hetsipanoherana ireo.
Raha marina fa hoe vao mainka manasarotra ny olana amin'ny maha-olombelona ireo famaizana ataon'i Etazonia, mandreraka ny vahoaka kiobàna koa ireo kabary tsara lahatra milaza fa ny olana rehetra atrehan'ny kiobàna dia mifandray amin'ny fahirano ataon'i Etazonia amin'i Kiobà. Kanefa, angatahan'ny vahoaka ny hanaisorana ilay fahirano mba hanamaivanana ireo fepetra iainana. Raha mazava fa tsy ny fitavozavozàn'ny governemanta fotsiny amin'ny famahàna ireo olana mivangongo tsy ahitàna vahaolana no vanja mandrehitra ireo hetsipanoherana tamin'ny 11 Jolay tao Kiobà, ny tsy fanomezana lanja ny fiantraikan'ilay fahirano sy ireo fepetra noraisin'ny fitondran'i Donald Trump dia mety ho hadisoana hanenenana. Notoheriko mandrakariva ny fahirano ataon'i Etazonia amin'ilay nosy, izay nahatonga fangirifiriana mafy ho an'ny vahoaka kiobàna, ary ara-tantara dia nanilihan'ny governemanta ireo aretina ratsy rehetra manjo an'i Kiobà.
Niova be ny toedraharaha hatramin'ny fiandohan'ny andian-taona 2000 rehefa nanomboka nahita fitoniana ara-politika sy ara-toekarena bebe kokoa i Kiobà noho ny olana iray saropady ara-jeôpôlitika: ny fiakaran'ilay filoha efa nodimandry tao Venezoelà, Hugo Chávez, mpiaradia pôlitika tamin'i Fidel Castro ho eo amin'ny fitondrana. Hatramin'ny fotoana nahatongavan'i Nicolás Maduro teo amin'ny fitondràna, i Venezoelà no namatsy solika an'i Kiobà.
Ny 17 Desambra 2014, nisy tranga iray hafa tsy mbola nisy toa azy nitranga: nambaran'ireo governemanta ao Kiobà sy Etazonia ho an'ny fiombonambe iraisampirenena ny fanapahankevitra hamerina ny fifandraisana diplaomatika, tapaka hatramin'ny 1961. Na mbola nitohy aza ireo famaizana, niainan'i Kiobà ny fisondrotana be tamin'ny isan'ireo mpizahatany avy any Etazonia, izay nitondra tombony niavaka ho an'ny toekarena, tsy hoe fotsiny teny amin'ny sehatra iadidian'ny fanjakana, fa koa tany anatin'ny sehatra tsy mainkina vao nipongatra — indrindra fa ireo toerana madinika fisakafoanana (fantatra ao Kiobà amin'ny hoe paladares) sy ny fampanofàna trano. Nandritra izany fotoana izany, nisy ny fisondrotana tsy nahazatra tazana tamin'ny faripiainan'ny vahoaka kiobàna. Amin'ny ankapobeny, tamim-panenbonana tokoa no nahatsiarovan'ny olompirenena kiobàna amin'izao fotoana izao izany fotoana izany, ho toy ny mariky ny fanantenana hisian'ny hoavy tsara kokoa.
Ny ampahany betsaka amin'ireo Kiobàna ao amin'ny nosy sy ireo am-pielezana any Etazonia no tsy nisy nanampo hoe ny ratsy indrindra no ho tonga. Tamin'ny 2017 izany no nanomboka, fony fitondran'i Donald Trump, izay tomponandraikitra tamin'ny famadihana, azo ambara ho manontolo, ny pôlitikan'ny teo alohany manoloana an'i Kiobà. Nandraisan'ny fitondran'i Trump fepetra famaizana i Kiobà, izay tonga tamin'ny faratampony mampiahiahy. Hita anatin'ireny ny fampiatoana ny fandefasana vola amin'ny alàlan'ny Western Union, ny fanafoanana ny fandaharanasa fampivondronana ankohonana, ary ny fanakatonana ny tolotra fanomen'ny kaonsily tao amin'ny firenena tamin'ny alàlan'ny masoivoho amerikàna tao Havana taorian'ireo fiampangàna henjana momba ny fisiana fanafihana tamin'ny feo mafy nanjo ny diplaomaty mpiasany, ary, mazava loatra, ny fitomboan'ireo famaizana.
Ny tarehimarika ôfisialy avy amin'ny governemanta kiobàna navoaka tao amin'ilay OnCuba News, fanontàna malaza miorina ao Etazonia, dia mampiseho fa : “Ny fahirano ara-bola sy amin'ny fandraharahàna apetrak'i Etazonia amin'i Kiobà, efa ho enimpolo taona izao, dia niteraka fatiantoka 9.157 tapitrisa dolara amerikàna ho an'ilay nosy teo anelanelan'ny Aprily 2019 sy Desambra 2020.”
Araka ny lazan'ilay akademisiàna safiotra kiobàna-amerikàna, María Isabel Alfonso, manampahaizana mandinika ny fiantraikan'ny famaizan'i Etazonia any amn'ireo ankohonana kiobàna, ary indrindra fa amin'ny vehivavy, dia dona ara-tsaina sy ara-pihetsehampo koa no aterany.
Rehefa dinihantsika ao anatin'ny fiainana andavanandron'ilay nosy izany angondrakitra izany, tena tsikaritra ny fiantraika ratsin'ireo pôlitika famaizan'i Etazonia an'i Kiobà tato anatin'ny taona vitsivitsy farany. Fa tsy iadian-kevitra ny hoe ny tena antony mahatonga ny fiainan-tsarotra lalovan'ny vahoaka kiobàna dia, tsy avy amin'ilay fahirano ihany (na dia nampitombo azy ireny aza ireo famaizana), fa noho ny tsy fahombiazan'ny lasitra pôlitika kiobàna izay manakana ny fivoaran'ireo hery mpamokatra, fepetra savaranonando tena ilain'ireo Kiobàna hahatongavana amina fiainana mendrika kokoa ao anaty demaokrasia.
Niaraka tamin'ny fiantombohan'ny valanaretina COVID-19 tao amin'ilay nosy, tany ampiadohan'ny Martsa 2020, niharatsy hatrany ny fiainana andavanandro. Ankehitriny, miaina ny olana ara-pahasalamana ratsy indrindra i Kiobà hatramin'ny nanombohan'ilay valanaretina, miaraka amin'ny salanisa efa mihoatra ny tranga 5.000 (niala avy amin'ny 1.000 tamin'ny Jona). Ireo tanàna toa an'i Matanzas,ohatra, dia voatery nitondra mpitsabo avy any amin'ireo faritany hafa, satria tsy nananan'ireo toeram-pitsaboana intsony ny fotodrafitrasa hiatrehana ny fitomboan'ireo marary tratry ny valanaretina tao amin'io faritany io.
Sahiko ny milaza fa miatrika ny olana ratsy indrindra tao anatin'ny tantarany i Kiobà izao, lasa olana amin'ny maha-olombelona tsy misy hafa amin'ilay nodiavin'i Venezoelà tato anatin'ny taona vitsivitsy, nisian'ireo filaharana tsy nisy fitsaharany rehefa hividy ireo zavatra ilaina andavanandro, toy ny mofo, raha ireo vokatra fidiovana sy ny vovo-dronono kosa tsy hita na dia tany amin'ireo toeram-pivarotana tantanin'ny fanjakàna aza, izay mivarotra sakafo sy entam-barotra amina vola vahiny. Fa ny tena rtsy indrindra sy mandravarava dia ny tsy fahampiana mampiahiahy amin'ireo fanafody, mahatonga ireo vahoaka kiobàna ho marefo ao anivon'ilay valanaretina.
Noho izany, raha tsy manova faran'izay haingana ny pôlitikany momba an'i Kiobà ny filoha amperinasa ao Etazonia, Joe Biden, dia mety ho zavadoza sy tsy ampoizina ny vokany. Angatahako koa ny governemanta kiobàna mba hamela ny hisian'ny fanehoana mangarahara ireo hetsipanoherana any anaty fampahalalam-baovao, tsy asiana resabe mampifandrirotra izay miteraka herisetra bebe kokoa eny anivon'ny samy Kiobàna. Na ny ankamaroanay Kiobàna ao amin'ilay nosy aza no very fanantenana noho ny fahantràna sy ny hasarotry ny fiainana isanandro, mbola antenainay ny hahita tara-masoandro ery amparan'ity tonelina toy ny tsy misy fiafaràny ity.
Shily 13 ora izay